मेरो पहिलो यौनकृडा जस संग मैले पहिलो यौन सुख पाएको थिए - Nepali Sex Tube
मैले तिमिलाइ दोस्रो पत्रमा मेरो कुमारि केटि संगको पहिलो यौनकृडको कुरा सुनाए।आज मेरो पहिलो यौनकृडा जस संग मैले पहिलो यौन सुख पाएको थिए,त्यो घटना बताउदै छु।तिमिलाइ थाहा छ तराइसंग मेरो कस्तो सम्बन्ध छ।हरेक लामो स्कुले बिदामा म तराइ जान्थे।
तराइ को आंप,लिच्चि रुखमै बसेर टिप्दै खादै गर्नु को मजानै बेग्लै थियो।गर्मिमा दिनभरि बाहिर निस्किन पनि गहारो हुन्थ्यो।सांझमा घुम्न निस्किन्थ्यौ।एक्दिन देउसो घरको बार्दलिमा बसेर हावा खादै थिए। घर अगाडिको आफ्नै जग्गामा कोइ घांस काट्दै थियो। म आफ्नै धुनमा वाकम्यान सुनेर बसेको थिए। तेति खेर सम्म आइपोड आइसकेको थिएन।मेरो घांस काट्ने को अगाडि टक्क गएर आंखा अडियो।आफ्नोसुर ले घांस काटिरहेकि त्यो केटिलाइ आफ्नो फरक तिघ्रा भन्दा माथि गएको थाहा नै थिएन।
उ आफ्नै सुरले घांस काट्दै थि।उ आफ्नो अगाडि को घांस सकिएपछि जति जति अगाडि बड्थि उस्को फरक तिघ्रा भन्दा माथि पुघ्त्यो।म झन् झन् उत्सुक हुदै त्यो भन्दा भित्र देखिन्छ कि भनेर हेर्ने प्रयत्न गर्थे। डालो भरिन लाग्यो मेरो कट्टु बाहिर बाटै भएपनि हेर्ने चाहना पुर नहोला जस्तो भयो।म कुदेर कलबाटै पानि खाने निहुले तल झरे र फेरि हेरे।म तल झरेपछि उ बढि सतर्क भै अब मैले पहिलेको जत्ति पनि हेर्न पाइन।मैले देखे त्यो केटि त मेरै घरको छिमेकि कमरुन निसा रहिछ। मुसलमान हो उ। तर सारै रामृ। उस्को सानैमा गौना भएको राम्रो भनेर माग्न आएका रे।मेरै उमेर कि हो उ।हामि लग्भग १५ को थियौ होला त्यो बेल। मैले उस्लाइ उस्कै भासामा सोधे क् छ ।
ऐले जस्तो मदिसे नेपालिको भवना थिएन।त्यो बेला। उस्ले लजाएर थिक् छ भनि र मलाइ कैले आएको भनि। मैले आफ्नो कुर भने।मैले त त कस्ति ठुलि भैचस भने उस्ले अफु नि भनि।सानोमा हामि संगै खेल्थ्यौ। मैले तेरो बिहा पनि भैसक्यो कि गौना मात्रै भने उस्ले बिहा पनि भयो।एकमहिन लोग्ने को मा बसे तिलकको कुरा नमिलेर मलै फर्काइ दिए।अब तिलक दहेजको को कुरा मिलेपछि जान्छु भनि। एति कुर भएपनि मेरो चहना त उस्को तिघ्रा हेर्ने नै थियो मैले भोलि आएर पछडिको घांस लग्नु है भने। उस्ले हुन्छ भनि।
भोलि उ आइ तेसैगरि घांस काट्न थालि।मेरा आंख फेरि तिघ्र भन्दा बडि हेर्न लालाइत थिए।चिनेकै केटि मलाइ सजिलो भयो मैले तल नै गएर गफ गर्न लागे उ घस काट्दै थि।मेरो आंखा उस्को दुइ तिघ्रको बिच्मा थियो।बल्ल मैले उस्को रातो कट्टु देखे म झन् बडि उत्साहित भए।मेरो लिंग अनायासै ठुलो भएर आयो।उस्ले डालो नभरुंजेल मैले उस्क तिघ्रा र कट्टु हेरिरहे।डालो भरियो उ गै। म पनि फर्के।तेस्रो दिन उ अर्कै तिर गै।उस्को घर सानो थियो हम्रो मथ्थिलो तल्ला बाट उनिहरुको घर् राम्रो संग देखिन्थ्यो।फेरि म सुत्ने कोठाको झ्याल र उनिहरुको शौचालय जाने बाटो संग संगै थियो।उ घांस काट्न आउदा म उस्लाइ देख्थे।
उस्को तिघ्रा सम्झना आउथ्यो।उ शौचालय मेरै कोठा छेउ भएर जान्थि। उस्लाइ देख्थे उस्को रातो कट्टु सम्झिन्थे। गर्मि थियो मेरो झ्याल खुल्लै हुन्थ्यो। अनि त झन उस्लाइ देख्थे। शौचालया भन्दा अलि अगाडि मेरै झ्याल संगै उनिहरु को धर थियो। उनिहरुको भांडा माझ्ने।नुहाउने र शौचालय बाट आएर हात् धुने तेइ हुन्थ्यो। एक्दिन बिहन म सुतिरहेको थिए।झ्याल खुल्लै थियो। मेरो आंखा खुल्यो कम्रुननिसा आफ्नो पर्खाल बाट मलाइ हेरिरहेकि थि।
मैले फेरि आंखा चिम्ले र आंखा सानो परेर निदए जस्तै गरेर उ मलै क् हेर्दै छ भनेर हेरे। उ एकोहोरो मलै हेरिरहेकि थि। मैले फेरि उस्का सेता तिघ्रा सम्झिए। गर्मि को समय धेरै लुग मेरो शरिर मा थिएनन्। कट्टु र गन्जि मा थिए।मैले एक्छिन सोचे के हेरिरहेकि छ मेरि बालसखा ले ।कतै मैले उस्को तिघ्रा हेर्न खोजे जस्तै उस्ले पनि मेरो शरिर को अंग हेरेर मजा लिएकि त हैन? अनायासै मेरो मन कालो भयो मैले आफ्नो शरिर निन्द्रा मा नै चिलाए जस्तो गरे अनि बिस्तारै मेरो हात लाइ गंजि भित्र छति मा र कट्टु भित्र लिंग कनाए जस्तो गर्न थाले।अनि बेला बेलामा सानो आंखामा उस्लाइ हेर्थे। उ हास्दै उत्साहित हुदै हेर्दै थि।अचानक उस्लाइ कोसैले बोलायो उ गै। अब मलाइ उ संग नजिक हुने चाहना झन् बढ्न लाग्यो।उ पनि हरेक दिन धार सम्म वा शौचालय जांदा मेरो कोठा मा आंखा तान्थि।म पनि उ कुन बेला तेता औन्छे भनेर छत बाट हेरिरहन्थे।
उ औन लागेको देख्ने बितिकाइ कुनै न कुनै निहु पारेर आफुलाइ अर्धा नंग्न बनाउथे। र उस्ले आफुलाइ हेरिरहेको थाहा नपाए जस्तो गरेर लुग खोल्दै जान्थे।एक्दिन त मैले सबै लुगा खोलेर पातलो गम्छ बेरेर सुतेको त्यो पनि अस्तब्यस्त भयेको जस्तो गरेर लिंग मत्रै छोपेर सुतेजस्तो गरे। उस्ले मेरो लिंगका ओरिपरि का भर्खर पलएका खैरो रौ हरु पनि देखि हूला।म फर्किद त उस्ले मेरो नांगो चाक पनि देखि। अब उस्लाइ पनि म संग आकर्षण बढ्न लाग्यो।
उ घांस नभए पनि मेरो घरमै घांस काट्न आउन थालि।म अन्जान बनेर उ आउदा गैहल्थे।एक्दिन तेसै गरि म उस्लाइ कता छे भनेर हेर्न छत मा गए उ नुहाउदै रैछे मैले आफुलाइ लुकाए तर उस्लाइ हेर्न छडिन। उनिहरुको बाथरुम थिएन।धाराको एक् छेउ बांसहरुले बेरेर नुहाउने ठाउं बनाएको थियो जुन हाम्रो छत बाट छर्लंग देखिन्थ्यो। मैले हेर्दै गए। उ टाउको नुहाउदै थि। बिस्तारै उस्ले आफ्नो पेटिकोटको इजार खोलि र जगले पानि खन्याइ।
अनि बुबु भित्र हात हालेर सबुन लगाउन लागि।एक्छिन पछि उस्ले चारै तिर आंखा घुमाइ कोहि नदेखेपछि पेटिकोट बाट बुबु निकालेर बुबु माडेर फोहोर निकाल्न खोज्दै थि। ठिक्क को बुबु तर उथेको,गोलो अनि गठिलो। म तेसै तेसै तातिसकेको थिए।उस्ले पेट्टिकोट् माथि सम्म तानि र आफ्नो यौनांग मा साबुन लगाइ। मैले उमेर पुगेको स्त्रीजातिको याउनांग देखेको त्यो पहिलो पटक थियो। खास भन्दा मैले यौनांग भन्दा साबुनमा लत्पतिएको योनि ओरिपरिका रौ हरु देखेको थिए। उस्ले नुहाएर सक्काइ। लुगा फेर्न लागि।
तेस्पछि फेर् पनि ओरिपोरि हेरिर र पेट्टिकोट को इजार खोलेर छोडिदि। अब उ सर्वांग नांगि थि। मैले एउटि यौन को मादकताले भरिएकि जवान केटिलाइ नांगो देखेको त्यो पहिलो थियो। म रातो भए।मेरा खुट्टा हरु लगलग कामि रहेका थिए।तर आंखा एकटकले उस्लाइ हेरिरहेका थिए।उस्ले अचानक् माथि हेरि र मलाइ भनि के हेरेको? म आतिए,डराए र म त्यहाबाट भागे।कतै उस्ले घरमा भनि त दिन्न।यि मुसलमन हरु एकदम क्रुर हुन्छन्।
उस्ले घर मा भनि भने मलाइ मार्छन्। म डराइ डराइ त्यो दिन बसे। मलाइ कोसैले केइ भनेन भने पछि उस्ले घरमा भनिन भन्नेमा म ढुका भए।भोलिपल्ट म बिहन नुहएर कोठामा पसे मैले देखे उ मेरो कोठामा हेर्दै शौचालय जादै थि। मैले सोचे आज यसलाइ पनि म आफुलाइ निर्बस्त्र देखाउंछु।म निर्बस्त्र भएर रुमलले जेउ पुछे जस्तो गर्न थाले ।उ देखिने गरि मैले ऐना रखेको थिए। उ अडिइ मलाइ हेर्नै थालि। म कैले छति पुच्थे कैले खुट्ट, मैले बिस्तारै उस्लाइ मेरो पछडि को भाग देखाउदै मेरो लिंग पुच्न लांगे उ एकोहोरो हेरिरहेकि थि।म उस्लाइ ऐना बाट हेर्दै थिए।म तातिदै गए। मेरो लिंग ठुलो हुदै गयो। त्यो उमेरमा हुने जति ठुलो भैसकेको ठियो। मैले फरि ऐनामा हेरे उ अझै मलै हेर्दै थि।
अब मैले मेरो लिंगलाइ हातले समए। चलाए। मैले सहन सकिन अनि लिंग तल माथि गर्न लागे। उ हेरिनै रखेकि थि।म उस्लाइ न देखेको जस्तो गर्दै थिए।मेरो लिंगबाट बिर्य निस्किनु र उ तिर फर्किनु एकैपटक परे।मैले आंखा चिम्लेर आफुलाइ बेडमा उत्तानो पारेर सुते उ हेरिनै रहि।मैले आंखा खोले र भने के हेरेको? उ हास्दै दगुर्दै गै।उ त्यो दिन फेरि घांस काट्न आइ।आज मैले उस्लाइ तल गएर भेट्न सकिरहेको थि इ न मलाइ लाज अफ्ट्यारो लागि रहेको थियो। बार्दलि बाट हेरे उ मलाइ हेर्दै मुसु मुसु हास्दै थि। मलै लाग्यो उस्ले मात्रै मेरो शरिर देखेकि होर मैले पनि उस्को शरिर देखेको हुं नि। उ हांस्छे भने म किन लजाउने। म पनि मुसु मुसु हास्न थाले।
मलाइ तल जाने साहस आयो म तल गये।एकछिन पछि उस्ले सोधि अर्काले नुहाइरहेको हेर्न लाज लाग्दैन,डर लाग्दैन।मैले पनि तलाइ नि। अर्काको कोठा मा लुकेर चिहाउन डर लाग्दैन भने। उस्ले के गरेको त्यो तिमिले कोठामा भनि ।म अक्मकाए।अनि भने तलाइ थाहा छैन? उस्ले खै मेरो लोग्ने ले तेस्तो गर्दैन थियो म एक् महिन उस्को मा बस्दा भनि। उस्ले खुलेर कुर गर्न लागेपचि म मा पनि आंट अयो मैले त पाएपछि किन गर्नु पर्यो नि ऐले त छैनस् तेरो लोग्ने ले ऐले गर्छ होला नि भने।अनि त पनि गर्छेस् होला नि भने। उस्ले छ्या पर्या छैन मलाइ गर्न भनि। एकछिनको एकछिनमै हम्रो कुरा पुरै यौन म मात्रै सिमित हुन पुग्यो।
उस्ले आफ्नो बिहा पछि एकमहिना मात्रै लोग्ने को घरमा बसेको,त्यो बेला पनि धेरै समय लोग्ने संग एक्लइ मा बस्न नपाएको कुरा सुनाइ। मैले सोधे तिमिहरुको कति पटक यौन संपर्क भन्यो। उस्ले भनि १ महिनमा धेरैमा ३ पटक। मेरो मुख बाट अनायसै निस्कियो”तेसो भए त तलाइ एक्दम चिलाउदो होल। है” मैले माया भरिएको भाषामा भने। उस्ले नकराउ भनि र घर जान हिडि।नारि जाति संग यौनका कुरा खुलेर गरेको पनि त्यो पहिलो पटक थियो।उस्ले उठेर ड।लो कम्मर मा राख्दै भनि शहरको मान्छे हरुलाइ लाजै लाग्दैन है जे मुखमा आयो त्यहि बोल्छन्।
मैले पनि ढिला नगरिकन भने तैले त हो नि मलाइ नांगै भएर देख।को पहिले त। उस्ले फेरि भनि नकराउ मलाइ सुते जस्तो गरेर आन्फो नांगो जेउ देखाउन खोजेको कहिले देखि हो तिमिलाइ सम्झना छ? तिमिले मलाइ हेरिरको छौ तिमि निदाको छैनौ भन्ने मलाइ थाहा नभाको हो र? उ ग इ। उ जब जब धारा म आउंथि म कट्टु खोलेर उस्लाइ देखैदिन्थे उ हसेर मुइ खाए जस्तो गर्थि म पनि इसाराले उस्लाइ आफ्नो बुबु देखाउन आग्रह गर्थे अनि छतमा दौडेर जान्थे उ बांसले बेरेको नुहाउने थांमा जान्थि र मलाइ कुर्त। को माथि बाट बुबु झिकेर देखाइदिन्थि। तेता ब्रा लगाउने चलन सायद थिएन त्यो बेला सम्म।म पनि बुबु हेर्थे अनि यौनांग देखाउन इसार गर्थे ।
सुरुवल खोलेर देखाउदा कोहि आइहाल्यो भने भनेर उ मान्दिनथि। कहिले काहि छिटो छिटो देखायेर सुरुवाल लाइ हाल्थि। एसरि हामिले आफ्नो याउन सुख लि रहेका थिएउ। म मा संभोगको इक्छा त थियो तर के गर्ने कसरि त्याहा सम्म पुग्ने केइ थाहा थिएन।मैले मेरो साथिहरु संग ब्लु फिल्म हेरेको थिए।एक्लै हुंदा त्यहि कल्पना गरेर बस्थे। अनि यस्तो अवसरलाइ पनि छोप्न नसकेको मा आफुलाइ ढिक्कर्थे।एक्दिन घरमा कोहि थिएन उ फेरि घांस काट्न आइ। मैले आज उस्लाइ घर भित्र आइज न भने उस्ले नाइ भनिन। उ पहिले देखि नै हाम्रो घरमा आउंथि जान्थि।फेरि छन्चले स्वभवकि थ्हि उ।
मैले भित्र आएपछि उस्लाइ मेरो लांडो हेर्छेस् भने उस्ले देखौनत भनि। मैले तेसै गरि कट्टु खोले र देखादिए।उस्ले खै चुन्छु है त भनि मैले चुन दिए। मेरो शरिरमा एउटा तरंग आयो।मेरो लिंग एकैछिन कम्रुननिसको बाथरुममा थड्याएको बांस जस्तो भयो। शरिरको सबै बल तानिएर लिंगमा आइपुगेजस्तो लाग्यो। मैले मेरो लिंग चलाउन थाले। उस्ले खै म चलाइ दिन्छु भनि र हल्लाइ दि उस्लाइ पनि रमाइलो लागि रहेको थियो। मेरो झर्यो। उ हांसि। मैले तैले तेरो लोग्ने को पनि गरेको होला नि भने उस्ले ३ चोटि त संभोग गरेको त्यो पनि हतारमा घरमा कोइ नभाको बेला येस्तो केइ गरेन भनि। मैले अब त देखान भने उस्ले कुर्त। बात सधै जस्तो बुबु झिकि मैले आजा कुर्ता खोलेर देखान भने उस्ले कुर्त खोलि भित्र गन्जि लगाकि थि अनि गन्जि भित्र बाट निकालि र देखै। मैले पनि खै म छुन्छु नि भने उस्ले कुनै बिमति जनाइन। मैले उस्को बुबु छोए,अनि समाते,उस्को बुबुको निपलमा आउलाले छुने बितिकाइ उस्को मुख्बाट आवज निस्कियो आह् आह्।
म अलि बढि कौतुहल भए फेरि बुबुमा हत्केला राखेर औलाले चलाए उ आंखा चिमिलेर आह् आह्को अवाज निकल्दै थि। म अब क् गर्ने मा अन्योलमा थिए। मैले उस्को सुरुवाल खोले उ सजिलै मानि उस्ले आज पनि त्यहि रातो कट्टु लगाकि थि मैले उस्लाइ आफ्नो बैठक कोठको सोफामा पल्टाए र आफ्नो लिंगौस्को पुतिमा हाल्न खोजे उस्ले कस्तो चांडो छिराउन खोजेको भनि।मैले क् गर्ने भन् न त मलाइ थाहा छैन भने। उस्ले ल अघि जस्तै दुध् चलाइ देउ न भनि मैले तेसै गरे अनि उस्ले मेरो दुध् चुसि देउ भनि मैले तेसै गरे तेस्पछि उ झन् बडि आवाज निकल्दै थि। मनमा यो संभोगको सहि तरिका हो कि हैअ गलत हुंड केइ नराम्रो पो हुंछ कि घरमा थह हुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो अनि ब्लु फिल्ममा तेसै गरेको देखेको ले थिकै होल जस्तो लाग्थ्यो। मैले उस्को बुबु नजान्द नजान्दै पनि माडे,चुसे ,चलाए।
उस्ले मेरो लिंग चलाइ दि। मैले अब बेला भयो भने उस्ले ल छिराउ भनि मैले छिराउने कोसिस् गरे।मैले उस्को प्वाल भेटिन। मैले पुरुष लिंगको ठाउंमा प्वाल खोजे तर त्यो त हाम्रो तिघ्रा छुट्ट्याउने ठाउंमा धेरै भित्र रैछ। बल्ल बल्ल मैले उसको पुति को प्वाल पाएं।उसको पुति भिजेको थियो। मैले सोधे तिमिहरुको सधै यस्तो भिजेको हुन्छ उसले भनि हैन नि ऐले भिजेको।मलै उस्को भिजेको पुति हेर्न मन लाग्यो मैले भने कमरुन म तेरो पुति रार्मो संग हेर्छु नि उस्ले हुन्छ भनि र खुट्टा फट्टाइदि। मलाइ रमाइलो लागिरहेको थियो। खैरो पुतिका रौहरु बिच् एउटा प्वाल थियो लामो केहिले काटेजस्तो। मैले भने तैले रौं कट्दिनस्, उस्ले ऐले सम्म काटेको छैन भनि।
अनि मैले भने त्यहि भएर होला है तेरो रौंहरु अझै खैरे छ। उस्ले सोधि तिमिले कति चोति काटेको छौ। मैले भने कत्ति कत्ति। उसले भनि क् ले काट्छौ मैले कैले बाउ को दारि काट्ने ब्लेडले कैले कैंचिले। उ हासि अनि फेरि सोधि। कहा बसेर काट्छौ मैले भने कहिले बाथरुममा कहिले आफ्नै कोठामा।हाम्रो हाम्रो बाथरुम त तिमिले देखेको छ ।कसरि काट्नु उस्ले भनि। अनि फेरि दारि काट्ने ले काटेको थाहा भयो भने उस्ले थपि। मैले भने ल म काट् दिन्छु तेरो हुन्छ। उस्ले टाउको हलाएर सहमति जनाइ। मैले हत्त न पत्त कैंचि र कपडा ल्याए उस्लाइ कपडामाथि बस्न भने।उस्ले किन भनि मैले रौ खस्यो भने पनि यस्मै खस्छ नि भने उ बसि। मैले एकहातले कैंचि समाते र अर्को हातले उस्को पुति को रौ।
मैले उस्को छेउ छेउ को पुति को रौं हरु काटेपछि प्वाला संगैको रौ काट्न पुतिको बिचमा उठेको छाला समाते उस्ले फेरि सुस्केरा हालि आह् मैले के भयो भने उस्ले केहि हैन भनि।म रौ काट्न जति त्यो बिच्को छाला एता र उता गर्थे उ त्यति आह आह गर्थि मलाइ त्यहि नै रमाइलो लाग्न थालेको थियो। मैले उसलै नभनेर नै उस्को पुति लाइ अलिकता फट्टाए उ केहि बोलिन। भित्र अर्कै खालको दृश्य थियो। मैले तुलना गरे मेरो लिंग बाहिरको छाला हटाउदा पनि यस्तै नरम मासु त छनि। मैलेबिस्तारै छोए। उ केहि बोलिन। मैले अन्जान मै आफ्नो औला उस्को प्वालमा छिराए। उस्ले बिस्तारै गरन भनि र आफ्नो आंखा चिम्लि।
मैल्ले बिस्तारै फेरि औला छिराए। उस्ले हो यो ठिक छ भनि। अनि के तलाइ रमाइलो हुन्छ मैले सोधे। उस्ले हो भनि। अब उस्ले आफ्नो हात पुतिको माथिल्लो भागमा लगि त्यहा गिर्खा हरु जस्तो थियो उस्ले आफ्नो आफ्नो हातले मेरो हात समातेर चलाइ दि। मैले खै छड म गर्दिन्छु भने र त्यसले सिकाए जस्तै गर्न थाले उ आंखा चिम्लेर अझै अझै भन्दै ग इ। अनि फेरि अझ चांडो अझ चांडो। म त्यहि अनुसार गर्दै गए। उस्ले अचानक मलाइ पल्टाइ र मेरो ठन्किएको लांडोलाइ आफ्नो पुतिमा हाल्न खोजि मेरो लांडोको बाहिरको छाला पछाडि सर्यो। उस्को पुतिभित्र अलिकता मत्रै पसेको थियो। पुति भित्र छिर्दाको पिडाले उ कराउनु र लांडो को बहिरि छाला पछिडि जांदाको पिडाले म कराउनु एकैचोटि परेछ।मैले भने खै छाड तैले त मलाइ पनि दुखाइस् आफुलाइ पनि। मैले उस्लाइ उत्तानो पारेर उस्माथि चढे र बिस्तारै आफ्नो अघिको पिडा सम्झिदै बिस्तारै छिराए।
उ फेरि कराइ ऐया ऐया।मलाइ यसपालि रमाइलो लागिरहेको थियो। मैले लांडो निकाले उस्ले किन निकालेको भनेर कराइ मैले तैले दुख्यो भन्या हैन भने उस्ले अघि तिमिलाइ दुखेको हैन किन फेरि छिराको त भनि ।मैले ल तेसो भए ल हेर भने।र फेरि छिराए।अघि भन्दा बडि छिर्यो उ ऐया भन्दै थि मैले सुनिना म लगतार भित्र हाल्दै गए।अब मैले लगभग आफ्नो लिंग पुरै छिराइ सकेको थिए।अब उ ऐया बाट अझै अझैको आवाज निकाल्दै थि।एकै छिनमा उ आंखा बन्द गर्दै अझै अझै भन्दै मलाइ जोडले समतेर आफुलाइ कक्राककुक्रुक बनाइ।अनि एकै छिनमा सिथिल भ इ र भनि अब नगर मलाइ दुख्यो।मैले क् भएको अघि सोधे उस्ले खै भित्र क् भको जस्तो भयो अनि पुगेको जस्तो भयो भनि।मेरो लिंग ठन्केकै थियो मैले सहन सकिन आफैले झारे। उ हेरिरहेकि थि ।उस्ले मेरो झर्ने बेला देखेर भनि हो अघि मलाइ पनि यस्तै भएको हो।मलाइ लाग्यो उस्को पनि झरेछ तेसो भए। मैले घडि हेरे घरमा मान्छेहरु आउने बेला भैसकेको थियो। मैले उस्लाइ ल चाडो घर जस्त को त्यस्तै पारु भने।
उ हासि र मलाइ सघाइ। मैले भोलि ऐज ल फेरि भने उस्ले भोलि घरमा कोहि हुन्न र? सोधि मैले हुन्न भने। म संग रात भरि समय थियो दोस्रो यौन सम्पर्क अगाडि संभोगको सहि आनन्द लिन जानकारि बटुल्ने। मैले या त आफु भन्दा ठुलो संग जानकारि बटुल्नु पर्ने थियो अथवा कतै पढ्नु पर्ने। त्यो गाउमा त्यस्तो जानकारि पाउने कितब हुने कुरा भएन।ठुला लाइ सोध्ना अफ्ट्यारो थियो। त्यो सांझ खेल्न जांदा मैले यौनक्रीडको कुरा निकाले। हमि मद्धे केइ एउट टठो केटो को बिह भैसकेको रहेछ।उस्लाइ मैले जिस्काउदै कुरा निकाल्नु थियो। उ उमेर ले हामि भन्दा अलि जेठो पनि थियो। उस्ले गर्बाका साथ सबै कुरकुरा भन्न लाग्यो। म सोद्दै जान्थे।
उ भन्दै गयो आइमाइ को तिन ओटा कुरा हो। ओठ,बुबु र पुति। ओठमा माया गर्नु पर्छ बुबु चलाउने,चुस्ने र माड्ने अनि तल भिजे पछि लांडो छिराएर तल माथि गर्ने।सुरु सुरुमा लांडो बाट घिउ चांडो निस्किन्छ।जाने पछि अलि ढिला झर्छ। मैले सम्झे मेरो त झरेको थिएन चांडो।खासमा अघिल्लो दिन मैले नांगै भएर कमुर्न लाइ देखाएर हस्त मैथुन गरेर झारेको थिए,भोलिपल्त संभोग भन्दा पहिले पनि उस्ले म झर्दिन्छु भनेर झारेकि थि एक् हप्ता देखि लगतार हस्त मैथुन भाको थियो जस्ले गर्दा मेरो त्यो बेला चांडो नझरेको रैछ।
उस्ले अर्को कुरा कतै केटि पाइहालिस् भने कण्डम लाउन नबिर्सिनु हैन भने बच्चा हुन्छ पनि थप्यो।बास्तवमा उस्ले बिस्तारमा भनेको थियो मैले त्यो यौन क्रीडामा लागु गर्नु थियो। मलाइ अरु कुरा भन्दा अब कण्डम चाहिएको थियो।उ संग छुटिएपछि म त्यहि सोचमा थिए। औषधि पसल,किरान पसल जहा पनि पाइन्थ्यो त्यो तर सबैले चिनेको ठाउमा किन्ने कुरा भएन। म साइकल लिएर निस्के। गर्मि को समय ढिलो सम्म उज्यालो हुने ३ किलोमिटर टढा एउटा पसलमा गए र कण्डम किनेर ल्याए।भोलिपल्ट घरका सबै बहिर गए। कम्रुन केहि न केहि निहु पारेर मेरो झ्याल निर आउथि। मैले आइज अब भने उ आइ।
आज म हिजो त्यो साथिले सिकए जस्तो गर्ने सोचमा थिए। उ आइ मैले उस्को किस गरे। घांटिमा कानम अनि ओठमा । मैले टंग किस गरे। उ पनि नजाने रैछ हामिले कोसिस् गरेउ। सयद उमेर नै त्यस्तो भएर होला हामि दुबै तातिसकेक थिएउ।मैले उस्को कुर्त,गंजि खोले उ अब अर्ध नंग्न थि। मैले साथि संझिदै उसले भने अनुसार ओठमा ओठ जोडेर नै उस्को डुध चलाए।मुन्टो चलाए।अनि निपललाइ चुस्न थाले। अब कमरुन् निसा पुरै पागल झै भएकि थि। मलाइ लाग्यो साथि को सल्लह काम लाग्यो। मैले उस्को सुरुवल खोले उ भित्र नांगि रैछ मैले आफ्नो पनि लुग खोले अनि उस्लै घुंडा को भर बस्न भने।
अनि मैले आफ्नो लिंगउसको मुख अग्गडि लगे र ललिपप जस्तै चुस्न भने। उस्ले त्यसै गरि।म पनि अब पागल बनेको थिए। मैले उस्लाइ ल मैले उस्लाइ ल अब घोप्टो पर भने उ कुकुर को जस्तो बनि मैले पछडि बाट लिंग छिरएको मात्रै क् थिए उ कराइ। ऐया नाइ दुख्यो नाइ। मैले अब बिस्तारै गर्छु भने उ नाइ नाइ पनि भन्दै थि तर मेरो लिंग चाहेकि पनि थि। उ फेरि तयार भै। मैले यस्पालि बिस्तारै माया गर्दै छिराए। उस्को भिजेको पुतिमा मेरो लांडो पुरै छिरेको थियो।अब मैले कुकुरको शैलिमा संभोग गर्न लागे।जति भित्र बाहिर गर्यो तेति आवाज आउथ्यो।पच्याक् पच्याक् दुबैझन् बडि इ मो सनमा आउथौ। हामिले एकदमै आन्दन्द लियौ त्यस्मा। मैले त्यस्पछि मात्रै आफ्नो ३ किलोमोटर पर गएर ल्याको कण्डम् देखे लगाए फेरि गरे। मेरो झर्यो उ पनि थाकि। पछि उस्को पुतिबाट निस्किएको रगत् ले भुइ भिजेको रैछ। हुनत पहिले लोग्ने संग सम्पर्क त राखेकि हो रे तर धेरै दिन पछि भएर होला रगत् निस्कियो।
अघिल्लो दिन बरु निस्किएको थिएन।उसले हिजो भन्दा आज धेरै पोल्यो भनि मैले फलाम ले फलाम लाइ काट्चा भने र फेरि उस्को दुध समाते र चुसे। उ नाइ मलाइ न तड्पा न तैले एस्तो गरिस् भने फेरि गर्न मन लाग्छ तर म आज सक्दिन एक्दम पोलिरछ भनि। मैले उस्को कुरा सुनिन। दुदु चुसिरहे,औला ले पुति चलै दि रहे। उ पुरै भिजि मेरो शरिर पुरै चुम्न लागि।मेरो लिंगलाइ चुस्दै अव्वज निकाल्दै थि हम्म्म्म्म्म्,हम्म्म्म्म्,अनि म माथि चडेर आफ्नो पुति मेरो लांडोमा हालि। पैले भन्दा उसको पुतिको प्वाल खुलेको हुनु पर्छ त्यो छिर्न त छिर्यो तर एकदमै टाइट थियो। मलै पनि एक् खाल्को पिडा त भैरहेको थियो तर संग संगै मजा पनि आउदै थियो।
उ म माथि जति उफ्रन्थि त्यति धेरै कराउथि। आह् आह् आह्। जीवनम हस्त माइथुन पछिको स्वर्णिम आनन्द दिने त्यो केटि अहिले पक्कै पनि ४-५ वटा कि आमा भैसकि होला। मुसलमनको परिवार नियोजन हुन्न। त्यो पाप हो। हामिले त्यो दिन भरपुर आनन्द लियौ। न डर लाग्यो न लाज। मेरो गर्मि को छुट्टि सकियो म काठमाण्डु फर्के।यौन को प्यस मेटाउने त्यो छोटो घटनाले झन् बढि प्यासि बनायो। अर्को लामो बिदाको पर्खाइ मा बसे।बिदा आयो म तराइ पनि गये। संग संगै उ पनि तिलक को कुरा मिलेर माइति बाट फर्कि सकिछ। मलाइ त्यो पछि तराइ बस्न मन लागेन म चाडै नै काठमाण्डु फर्के।त्यो हाम्रो बाल यौन क्रीड अहिले सम्झदा के त्यो यथार्थ हो र भने जस्तो गरेर धमिलो संझना भएर बसेको छ।